Muuri News Network » LA OGAADAY: Shaqsiga ka danbeeya bur burka Magaalada Marka ee xarunta G/Sh/Hoose..
LA OGAADAY: Shaqsiga ka danbeeya bur burka Magaalada Marka ee xarunta G/Sh/Hoose..
Aug 1, 2016 - 1 Jawaab
Degmada Marka ee caasimadda gobolka shabeelha hoose ayaa ah magaalo u dhibaateysan dowladda uu Madaxweynaha ka yahay Xassan Sheikh Mohamud, maadaama aan wax nabad ah aysan ka dhicin 4-tii sano ee uu dalka madaxweynaha ka ahaa.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa booqday degmada Marka dabayaaqadii sanadkii 2013-kii xilligaas oo ay Magaalada Marka iyo deegaanda hoos yimaada ay si buuxda u maamulayeen Ciidama deegaanka; nabadeedana laga dareemayay dhamaan degmooyinka kale ee gobolka SH/HOOSE.
Booqashadii Madaxweynaha iyo soo dhaweyntii ay u sameeyeen dadka deegaanka ayaa si wanaagsan ku soo dhamaatay, isagoo hal habeen soo seexday islamarkaana ku soo dabaashay Badda; isiga iyo wafdigii la socday ba, magaaladuna waxa ay ahayd mid aad u camiran shacab badana ay ku noolaayeen.
Maamulka degmada Marka,odayaaasha dhaqanka beesha Biimal iyo Madaxweynaha ayaa isla meel dhigay in xarun tbaabr laga furo Ceeljaale ciidamada deegaankana halkaas lagu qarameeyo ayna ka sii shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida kajirtay Degmada Marka.
Kadib markuu ku noqday caasimadda Muqdisha, taa bedelkeeda madaxweynaha waxa uu amar ku bixiyay in la weeraro degmada Marka ciidamada deegankana ay isasoo dhiibaan tababar cusubna ay ku qaadan doonaan xerada tabarka Jaziira oo hadda loo bixiyay xerada tababarka Dhagabadan.
Dadka deegaanka ayaa ka dhiidhiyay arintaas; ciidamii militariga oo qaab qabiil u abaabulan isla markaana ku shaqeeynayay amarka Madaxweynaha ayaa weerar ku soo qaaday degmada NO50 oo ay si buuxda u maamulayeen ciidamda deegaanka; dagaalka ayaa ku sii fiday ilaa degamda Marka waxaana lagu gumaaday hantida qaranka dhamaan shacabka shabeelaha hoose.
Dagaaladaas ayaa waxa ku barakacay kumanaan, waxa ku dhaawacmay kumanaan waxa ku dhintay boqalaal; waxaa lagu gubay shacab iyo guryaba, ilaa haddana waxaa socda dagaaladaas balsa kuma guuleesan hadafkii uu lahaa ee ahaa inuu gacanta u geliyo maamulka magaalada dadka asaga ku heyb ah; waxaa ka dhiidhiyay oo nafta u huray dhalinyaro geesiyaal ah oo ka soo jeeda beesha Biimaal, ilaa hadana u taagan difaaca dalkooda iyo dadkooda.
Waxaa bilowday sanadkii 4-aad oo ay magaalada Marka u dhibaateysan tahay madxweynaha Soomaaliya, degmada Marka kama dhicin wax horumar ah tan iyo markii ladoortay balse taa bedelkeeda Eeg oo u fiirso horumarka laga gaaray degmada Jowhar hadii ay ahaan lahayd waxbarsho, gancsiga, amaanka IWM.
Magalaada Marka waxa ay dacwa ka tahay Madaxweyne Garguurte mana ka samri doonto dhibaatadii uu biday intii uu xilka hayay balse bedel qeyrqaba.
One Response to LA OGAADAY: Shaqsiga ka danbeeya bur burka Magaalada Marka ee xarunta G/Sh/Hoose..
wax garad wax looma sheego wax laawe wax looma dhiibto says:
01/08 at 9:34 am
gurguurte kaligiisa ma aheyn ee dadkeynane lug baa qaar u laamneyd oo laba wajiile ah ayaa ku jiray dadka oo welina ku jiro oo caado qateyaal ah ee degaanka looma dhameyn xorayntiisa iyo taladiisaba oo welina joogaan ee intii kuwaasi ay joogaane ha ka yaabin in nabad loogu soo noqdo deganada bimaal oo hadeer wada burbursan oo dhibatada ay ku habsatay ee waana loogu tala galay dhankaas in aysan nabag noqon oo dadkiisa kuli duurka la wada geliyo oo leyska horkeeno oo dushooda leys aadiyo ee talada ilaah saarta xasbunalaahi wa nicmal wakiila